Usoo guurista Vantaa - InfoFinland
Magaalooyin > Vantaa > Usoo guurista Vantaa
Wixii dheeraad ah ka akhriso: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.
Barta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guuridda ee Helsinki ayaad ka samayn kartaa codsiga joogitaanka dalka, waxaad kaloo ka samayn kartaa is diiwaangelinta xuquuda joogitaan muwaadinka midowga yurub.
Goobta adeegga Helsinki ee Hoggaanka socdaalka:
Waxay furan tahay: Isniin–Jimco saacadda u dhexeysa 8–16.15
Sidoo kale waxaad adeegga internetka ee Enter Finland ka samayn kartaa codsiyada ruqsooyinka joogitaanka oo badan iyo sidoo kale isdiiwaangelinta muwaadinka midowga yurub. Haddii aadan aqoonin isticmaalka kombuyuterka, markaas codsiga waraaq ahaan u samee una gee barta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guuridda.
Waxaa habboon inaad mar walba waqti horay uga sii qabsatid barta adeegga. Waxaad waqtiga ka qabsan kartaa adeegga waqti qabsashada ee Xaafiiska dal u soo guuridda. La soco, in barta adeegga aan laga bixin karin wax la talin ah oo la xiiriira arimaha ruqsooyinka.
Warar kale ka sii aqri: U soo guurista Finland.
Haddii aad si joogto ah ugu soo guurto si aad u deganaato waa inaad degmada isaga diwaangelisaa sidii qof degane ah. Waxaad iska diiwaangelisaaHay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto).
Tel. diiwaangelinta dadka ajaanibta ah 029 55 36 320
Marka aad aadayso Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, horay u sii qaado:
aqoonsi qofeed (tusaale ahaan baasaboor)
ogolaanshaha joogista iyo kaarka joogitaanka (haddii aad u baahan tahay ogolaanshaha joogitaanka Finland)
shahaadada diiwaangelinta ee xaq u lahaanshaha joogitaanka (oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) (haddii aad tahay muwaadin u dhashay Midowga Yurub)
shahaadada dhalashada cunugaada
Ogsoonoow, in warqadaha dibadda laga keenay ay ahaadaan kuwa la sharciyeeyay. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sharciyeynta dukumentiyada waxaad ka heleysaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ama wakiilka dalkaada ee Finland jooga.
Warar kale ka sii aqri: Isu diiwaangelin degene.
Haddii aad dhowaan u soo guurtay soonaha caasimadda, waxaad International House Helsinki hal booqasho uga heli kartaa talo-bixin iyo adeegyada dowladeed. Waxaad ka cadsan kartaa:
talo-bixin lacag la’aan ah iyo arrimo la xiriira soo guurista oo ku qoran luqado kala duduwan
lambarka aqoonsiga Finnishka, isu-diiwaangelinta sidii degane iyo ogeysiiska macluumaadka cinwaanka
kaarka canshuurta iyo lambarka canshuurta, talo-bixin ku saabsan canshuurista
macluumaadka macnfacyada ammaanka bulshada
talo-bixinta adeegyada Xafiiska Shaqada iyo billaabista shaqo-raadinta
talo-bixinta hawlgabka shaqada iyo macluumaadka shahaada A1
a talo-bixinta xiriirka shaqada
talo-bixin loogu talagalay ganacsatada iyo shaqaalaha
IHH Service Advisor App ee shabakadda ku habboon wuxuu kaa caawinayaa helitaanka hay’adaha dowladda ee saxda ah wuxuuna sidoo kale kaala talinayaa dokumentiyada aad u baahan tahay in aad u soo qaadato booqashada.
IHH Service Advisor App ee shabakadda ku habboonIngiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 19.08.2021 Boggan war-celin ka soo dir